Fandraharahana eto Madagasikara :: Milaza hampiasa vola fa tsy hanao politika ireo vahinin’ny Medef • AoRaha
Fandraharahana eto Madagasikara Milaza hampiasa vola fa tsy hanao politika ireo vahinin’ny Medef
«Tsy hanao dip­lao­masia no anton-dianay eto fa handraharaha ». Voa­fehin’io fehezanteny io ny fahavononan’ireo Mpandraharaha mivondrona ao ana­tin’ny hetsika ho an’ny fam­piroboroboana orinasa avy any Frantsa (Medef) hampiasa ny volany eto Madagasikara. Nisongadina nandritra ny fihaonan’izy ireo tamin’ireo vondrona mpandraharaha malagasy, tetsy amin’ny Hotel Carlton, omaly, ny dinik’asa hiarahan’ireto mpandraharaha frantsay ireto sy ny avy eto an-toerana.
Hifantoka amin’ny fampi­roboroboana sehatra efatra, dia ny fandraharahana angovo, ny fiahiana ny fahasalamana, ny fampiroboroboana ny fambolena ary ny fananga­nana fotodrafitrasa goavana, toy ny seranam-piara­mani­dina, ny fampiasam-bola ataon’ireo mpandraharaha ao amin’ny Medef.
“Efa hita taratra ny fahavo­nonan’i Madagasikara hampiroborobo ny sehatra ara-barotra. Efa misy fivoarana ihany koa ny sehatry ny fandraharahana eto an-toerana, ka vonona izahay hiroso amin’ ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana malagasy”, hoy i Patrick Martin, filoha mpitarika ny delegasionan’ny Medef, tetsy amin’ny Carlton. 14 taona aty aoriana
Mahatsapa ireto mpandraharaha vahiny ireto fa: “efa misy fivoarana ny ady amin’ny kolikoly sy ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana eto amintsika”. Mahavelombolo azy ireo ihany koa ny toky nataon’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta, izay miasa mafy hanatsara ny sehatry ny fandraharahana eto Madagasikara. Tsy hianona fotsiny amin’ny fampiasam-bola eto amintsika anefa fa nilaza ny hanampy sy hiara-hiasa amin’ ireo mpandraharaha malagasy ihany koa ny Medef.
Hisy ny fanampiana an’ ireo orinasa madinika. “Efatra ambin’ny folo taona taty aoriana indray vao tonga teto amintsika ireo mpandraharaha ireo. Misy dikany izany ary hita fa tena vonona ny handra­haraha eto amintsika tokoa izy ireo. Mety hisy, araka izany, ny fifampidinihana hahafahana miara-miasa”, hoy Andriamamonjiarisoa Noro, filohan’ny Vondrona mpandraharaha eto Madagasikara (Gem).